नेपाल आज | वीर्य स्खलन भनेको परमानन्द हो (भिडियोसहित)
वीर्य स्खलन भनेको परमानन्द हो (भिडियोसहित)
काठमाडौं । कृषि वैज्ञानिक तथा नयाँ शक्ति पार्टीका नेता मदन राईसँग यसपटक हामीले प्रेम, यौन र जीवनबारे चर्चा गरेका छौं । राईले मानिसमा तत्व ज्ञानको अभावमा आडम्बरी बनेको बताए । उनले यौनका मामिलामा महिला र पुरुषले बढी नाटक गर्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यस्ता नाटक मैले धेरै गरेँ । यसकारण मलाई नाटक होइन भनेर कसैले झुक्याउनै सक्दैन ।’ भिडियो अन्तर्वार्ताका क्रममा राईले व्यक्त गरेका धारणाको सार निम्नानुसार छन्ः
‘प्रेम र यौन आपसमा सम्बन्धित छन् । सृष्टि कसरी निर्माण भयो भन्ने कुरा बुझ्दा पनि यी कुरा जोडिन्छन् । आफू को हुँ ? मेरो आगमनको अर्थ के हो ? भन्ने सोच्न थालेँ । म जैविक गति भएको प्राणी हुँ । मैले सोच्दा प्रेम स्वार्थ हो । प्रकृतिको नियम पनि हो । आमाले सन्तानको माया गरेन भने गर्भमा सन्तान राख्दैन । प्रेम चाहिँ प्रकृतिले बनाएको एक अवस्था हो ।
स्वार्थ नै हो आमा र बाबुको । सन्तान किन खोज्ने त ? त्यो बुढेसकालमा कमजोर भइन्छ, त्यो बेला सन्तान चाहिन्छ भनेर स्वार्थका कारण सन्तान जन्माउँछन् । महिला र पुरुषबीच सम्बन्ध हुन्छ । स्वार्थका लागि धेरै भौतिकवस्तुको सिर्जना भएको छ । पशुपंक्षी, किरा, किटाणु सबैलाई स्वार्थ दिएको छ । त्यो स्वार्थ पूरा गर्न प्रेम पनि दिएको छ । केटा र केटीबीचमा सेक्स नहुने हो भने प्रेम सम्बन्ध हुन सक्दैन । सम्मानको सम्बन्ध हुन सक्छ । किनभने बुढाबूढीमा यौन हुँदैन । बच्चाहरूमा पनि यौन हुँदैन ।
तर सम्मान त हुन्छ । त्यहाँ सेक्स हुँदैन । त्यो प्रेम होइन । स्वार्थको सम्मान हो । सम्मान र प्रेममा धेरै फरक छ । प्रेम भनेको भित्रबाटै निस्कने भाव हो । यौनको तहमा पुगेको पुरुष र महिला एक स्थानमा छन् तर यौन भएन भने त्यो लोग्नेस्वास्नी हुँदैनन् । परिवार पनि नाम मात्रैको हुन सक्छ । यौन छैन भने प्रेम हुँदैन । परिवार त रहिरहन सक्छ किनभने त्यहाँ बाध्यता हुन्छ । श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध भनेको सेक्सका लागि हो । सेक्सको समय सकिएपछि साथीको रूपमा विकास हुन्छ । प्रेममा सेक्स हुनै पर्छ । नभए पनि सम्बन्ध राम्रो छ भने त्यो स्वार्थको सम्मान हो । बावुआमालाई गरिने प्रेममा कामवासना मिसिएको हुँदैन ।
श्रीमान् श्रीमतीबीचको प्रेममा वासना हुन्छ । सबै मानिसहरू भिन्न भिन्न तत्वको सम्मिश्रणले बनेका हुन्छन् । टेस्टेस्टोरन हार्मोन पुरुषमा र एस्ट्रोजन हार्मोन महिलामा उत्पन्न हुन्छ । त्यसको मात्राले कसैलाई बढी सेक्स चाहिन्छ । कसैलाई कम सेक्स चाहिन्छ । हार्मोनको उत्पादन कम भयो भने यौन चाहना हुँदैन । महिलामा पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ, पुरुषमा पनि हुन सक्छ । यस्तो हुनु भनेको अधुरो शरीर हो । रोगी भनी नहालौं । संसारको समाज आडम्बरी छ । जसले धर्ममा विश्वास गर्छ, त्यो आडम्बरी हुन्छ ।
सत्य एकातिर छ, उसको सोचाइ र गराई अर्कोतिर छ भने त्यो ढोंग हो । फाइँफुट्टीको रूपमा मानिसहरूले यस्तो भन्छन् । हामी चार तत्वले बाँच्दछौं । एक ठोस तत्व, तरल तत्व, ग्यास तत्व र अर्को न्यानो तत्व भनेको आगो । यी चार तत्वले जीवन चल्छ । खाना ऊर्जामा रूपान्तरण हुन्छ । खाना चार्ज हो अनि मल चाहिँ डिस्चार्च हो । खाएपछि निकालेन भने ठूलो समस्या आउँछ । पानी पिएन भने केही समय मान्छे बाँच्छ । पिसाब गर्न पाएन भने मर्छ होला । खाना र पानी भनेको ठोस र तरल हो । त्यो चार्ज हो भने वीर्य सेमी लिक्विड हो । त्यो डिस्चार्ज हुनै पर्छ । हुन पाएन भने समस्या हुन्छ ।
सन्तानको निरन्तरताका लागि वीर्य बनेको हो । किनभने मान्छेको आयु त कम हुन्छ । आफू नबाँचे पनि आफ्ना उत्तराधिकारी छोडेर जानका लागि वीर्य बनेको हो । खाना खाँदा आनन्द आउँछ । सुत्दा आनन्द हुन्छ । त्यो एकजनाले गर्ने भोग हो । तर दुई जना मिलेर एउटै आनन्द लिने भनेको समभोग अर्थात् सम्भोग हो । त्यो परमानन्द पनि हो । मानिसमात्रै होइन सबै प्राणीको परमानन्द हो । वीर्य स्खलन भनेको परमआनन्द हो । सन्तानको निरन्तरताका लागि पनि हो । तर तत्व ज्ञान हुनेका लागि मात्रै थाहा हुन्छ । मलाई तत्व ज्ञान छ । यसकारण यी सबै कुरा भन्छु । यही कारणले मलाई स्वस्थ बनाएको छ ।
अरू केहीले मलाई पागल पनि भन्छन् । म नेपाली समाजका लागि अनुपयुक्त हुन सक्छु । तर सत्यको जगमा उभिएको छु । सेक्सको मामिलामा सबै प्राणीमा भाले नै सक्रिय हुन्छ । पोथी चाहिँले बच्चा जन्माउनुपर्ने भएकाले अलि कति निष्क्रिय हुन्छ । मान्छेको ज्ञानेन्द्रियलाई आकर्षण गर्नका लागि महिलाहरूलाई आकर्षक बनाएको छ प्रकृतिले । यौन चाहना भनेको किशोरावस्थाबाट सुरु हुन्छ । खानपिन ठीक छ भने १० वर्षबाटै यौन चाहना सुरु हुन्छ । कुपोषण छ भने १३–१४ वर्ष लाग्छ होला ।
म्हिलाहरूमा ५० वर्षदेखि यौनचाहना क्रमशः कम हुँदै जान्छ । पुरुषहरूमा त ९० वर्षसम्म पनि सक्रिय हुन्छन् । पवित्र प्रेममा यौनको कुरा मतलबको विषय होइन भन्नु अज्ञानता हो । भ्रम हो । ढोंग हो । कसैले पनि मलाई सेक्ससँग मतलब छैन, माया मात्रै गर्छु भन्छ भने त्यो बेइमानी हो । सामान्यतः केटीले केटालाई भन्छे कि तिमी सेक्सको कुरा मात्रै गरिरहन्छौं । अनि केटाले भन्छ, हैन म त तिमीलाई माया गर्छु । विश्वास गर न । यस्तो तर्कवितर्क आम युवायुवतीमा हुन्छ । खासमा केटाले प्रेम गर्छु भन्नुको मतलब पनि यौनका लागि फकाएको हो । जतिसुकै पवित्र प्रेम गर्छु किन नभनोस् त्यसको गन्तव्य सेक्स नै हो ।
यौनबाहेक केही पनि होइन । मैले त थुप्रैसँग त्यस्तो नाटक गरिसकेको हुनाले म भन्छु कि यस्तो नाटक बन्द गर भन्छु । केटीले दंग्याउनै पाएन भने त अर्थ पनि भएन । केटाले सेक्स मात्रै चाहन्छ । किनभने पुरुषको काम सेक्स गर्नु मात्रै हो । महिलाले त गर्भ बोक्नुपर्छ । जन्माउन र हुर्काउनु पर्छ । जुनसुकै प्राणीमा पोथीले सेक्स गर्न सजिलै मान्दैन । त्यो चाहिँ एकछिन दंग्याएको, सुरक्षा खोजेको, प्रेम र केयरिङ खोजेको हो ।’